As of Sat, 06 Jun, 2020 10:55
मेलम्ची आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न निर्देशन
खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री बिना मगरले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम रफ्तारमा अगाडि बढाउन निर्देशन दिएकी छिन् । मन्त्री मगरले सुन्दरीजलमा भइरहेको मेलम्ची आयोजनाको कामबारे निरीक्षण गर्ने क्रममा आयोजनाको काम रफ्तारमा अगाडि बढाउन ठेकेदारलाई निर्देशन दिएकी हुन् ।
सुनकोसी–मरीण डाइभर्सन समयमै पूरा गर्ने प्रतिवद्धता
सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक सहयोग गर्ने गरी सर्बपक्षिय प्रतिवद्धता गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापमा आयोजना गरिएको बैठकमा विभिन्न सरोकारवाला निकायले आयोजना निर्माणका लागि सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता गरिएको हो ।
सोमवार, चैत्र ३, २०७६
सुपर दोर्दी ‘ख’ को निर्माण कार्य द्रुत गतिमा
लमजुङको दोर्दी खोलामा निर्माणाधीन सुपर दोर्दी ‘ख’ जलविद्युत् आयोजनाको काम द्रुत गतिमा अघि बढिरहेको आयोजना प्रवद्र्धक कम्पनीले जनाएको छ । आयोजनाको प्रवद्र्धक सुपरदोर्दी इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको पाँचौ साधारणसभामा कार्य प्रगतिबारे जानकारी गराइएको हो । साधारणसभामा आयोजनाको कार्य प्रगतिबारे जानकारी गराउँदै कम्पनीका अध्यक्ष इजनकुमार बरालले आयोजनाको सिभिल तर्फको सुरुङ खन्ने काम ८५ प्रतिशत पूरा भएको बताए । आयोजनाको पहुँच मार्ग, साइट अफिस, कन्सट्रक्सन पावर, क्याम्पलगायतका पूर्वाधार निर्माणको काम सकिएको अध्यक्ष बरालले बताए ।
शीत भण्डार निर्माण गरिँदै
किसानले उत्पादन गरेको तरकारी तथा बिउ लामो समयसम्म भण्डारण सुविधाको लागि बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशको १० जिल्लाका १२ स्थानमा शीतभण्डार निर्माण गरिरहेको छ । वहुवर्षीय कार्यक्रमअन्तर्गत गत वर्षदेखि सुरु भएको शीत भण्डार निर्माणको काम आगामी वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकार तथा निजी क्षेत्रसँगको सहलगानीमा शीत भण्डार निर्माण गरिरहेको हो । १२ वटा शीत भण्डार निर्माण गर्न ७८ करोड रुपैयाँ लगानी निर्धारण गरिएको छ । जसमध्ये ५८ करोड रुपैयाँ मन्त्रालयले र २० करोड रुपैयाँ स्थानीय सरकार तथा निजी क्षेत्रले बेहोर्ने गरी सम्झौता भएको छ ।
फोहोरबाट ग्यास उत्पादन गर्न सम्झौता
वीरेन्द्रनगरको फोहोरबाट वायोग्यास र जैविक मल उत्पादन गरिने भएको छ । यहाँको एक निजी कम्पनीले फोहोरबाट ग्यास र जैविक मल उत्पादन गर्नेगरी सम्झौता भएको हो । परियोजना निर्माणका लागि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र परियोजना निर्माणकर्ता कम्पनी केपी व्यवसायिक सेवा प्रा.लि.बीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएको छ ।
हाइड्रो भिलेज र सेर्वा दिनामिकबीच साझेदारी
हाइड्रो भिलेज प्रालिले मलेसियास्थित सेर्वा दिनामिक इन्टरनेसनल लिमिटेडसँग साझेदारी गर्ने भएको छ । सम्झौता सम्पन्न गरेको छ । शुक्रबार भएको सम्झौताअनुसार सेर्वा दिनामिकले हाइड्रो भिलेजको सेयर खरिद गर्नुका साथै इन्जिनियरिङ, खरिद, निर्माण र उत्पादन (ईपीसीसी) मा सहभागी हुनेछ । सेर्वा दिनामिकले परियोजनाको सञ्चालन तथा मर्मत पनि गर्ने उल्लेख छ । सेर्वा दिनामिक मलेसियाका सेर्वा दिनामिक होल्डिङ्स बर्हाडको सहायक कम्पनी हो ।
बिहिवार, फाल्गुन २९, २०७६
लुम्बिनी बृहत् गुरुयोजना
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयानमन्त्री योगेश भट्टराईले लुम्बिनीको बृहत् गुरुयोजना चाडैं स्वीकृत गरेर द्रुत गतिमा काम अगाडि बढाउने बताएका छन् । बुधबार लुम्बिनी विकास परिषद्को बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भट्टराईले नेपालको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य लुम्बिनीको बृहत् गुरुयोजना यसै वर्ष स्वीकृत गरेर काम अगाडि बढाउने बताएका हुन् । उनले लुम्बिनी विश्वमा नेपाललाई चिनाउने सम्पदामध्ये अग्रणी सम्पदा भएकाले पनि अब गुरुयोजनाअन्तर्गत नै द्रुत गतिमा यसको विकासलाई अगाडि बढाउने बताए ।
शुक्रवार, फाल्गुन ३०, २०७६
विपन्नलाई आवास निर्माण
दाङको बंगलाचुली गाउँपालिकाले आर्थिक रूपमा विपन्न परिवारका लागि ‘आवास निर्माण’ गरेको छ । गाउँपालिकाले आर्थिक रूपमा विपन्न परिवारका लागि तीन करोडको लागतमा घरहरू निर्माण गरेको हो । संघीय सरकारको विशेष अनुदानअन्तर्गत दुई करोड ६४ लाख र गाउँपालिकाको ३६ लाख रुपैयाँबाट गत वर्ष बंगलाचुली गाउँपालिकाको चार वडाको पाँच स्थानमा दुई कोठे ३० वटा घर (प्रिफेब) निर्माण गरिएको बंगलाचुली गाउँपालिकाका प्रशासन शाखा प्रमुख गोपाल केसीले बताए । “विपन्न समुदायका लागि आवास निर्माण गरेका छौं,” उनले भने, “निर्माण भएका आवासमा मानिस बस्न सुरु गरेका छन् ।”
अब त बन्छ कि !
भूकम्पले क्षतिग्रस्त काठमाडौंको रानीपोखरी पुनर्निर्माण हुँदै ।
प्राधिकरणले सवा चार खर्ब लगानी गर्ने
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आगामी पाँच वर्षभित्र ४ खर्ब २६ अर्ब ८१ करोड लगानी गर्ने गरी कर्पोरेट विकास योजना तयार पारेको छ । विद्युत् प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्ष २०७६-७७ देखि २०८०-८१ सम्मका लागि बनाएको कर्पोरेट विकास योजनामा ऋण र स्वलगानी (इक्विटी) मार्फत यतिधेरै लगानी गर्ने उल्लेख छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आगामी पाँच वर्षभित्र ४ खर्ब २६ अर्ब ८१ करोड लगानी गर्ने गरी कर्पोरेट विकास योजना तयार पारेको छ । विद्युत् प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्ष २०७६-७७ देखि २०८०-८१ सम्मका लागि बनाएको कर्पोरेट विकास योजनामा ऋण र स्वलगानी (इक्विटी) मार्फत यतिधेरै लगानी गर्ने उल्लेख छ ।
सुरुङमार्गको लागत र समय बढ्ने जोखिम
नेपालको पहिलो सुरुङमार्गको निर्माण सरकारी प्रक्रियाकै कारण ढिला हुने संकेत देखिएको छ । थानकोटदेखि धादिङको सिस्ने खोलासम्म जोड्ने सुरुङमार्ग निर्माणको मुआब्जा विवाद र विस्पोटक पदार्थ आयात गर्नमा नेपाली सेनाले स्वीकृतिमा ढिलाइ गरेसँगै आयोजनाको लागत समेत बढेर जाने र समय सीमाभित्र आयोजना सम्पन्न हुने सम्भावना क्षीण हुँदै गएको छ ।
माथिल्लो तामाकोसीको हेडवक्स परीक्षण हुँदै
निर्माणाधीन ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको हेडवक्सको परीक्षण हुने भएको छ । आयोजना निर्माण सुरु भएको ८ वर्षपछि बाँध तथा डिस्यान्डर बेसिनको परीक्षण गरिन लागेको हो । सुरुमा आयोजनाको बाँधमा पानी जमाएर परीक्षण गरिन्छ । बाँधमा पानी जमाएर हरेक गेट बन्द गरेर पानी जम्छ कि जम्दैन परीक्षण गरिने आयोजनाका प्रवक्ता डा. गणेश न्यौपानेले जानकारी दिए । बाँधको परीक्षणपछि बालुवा थिग्रयाउने पोखरी (डिस्याण्डर)मा पानी भरेर परीक्षण गरिन्छ । परीक्षण आउँदो मार्च १५ अर्थात चैत २ गतेबाट सुरु हुने उनले बताए ।
बुधवार, फाल्गुन २८, २०७६
वैशाखभित्र पूरा हुँदै भैरहवा–लुम्बिनी–तौलिहवा सडक
राष्ट्रिय प्राथमिकताको आयोजना भैरहवा–लुम्बिनी–तौलिहवा सडक विस्तार कार्य वैशाख महिनाभित्र पूरा हुने बताइएको छ । विसं २०७७ वैशाख १७ गतेभित्र सडक स्तरोन्नतिको निर्माण सम्पन्न गरी जेठ मसान्तभित्र हस्तान्तरण गर्नेगरी काम अगाडि बढाइएको निर्माण व्यवसायीका प्रतिनिधि पवन चौधरीले बताए । बत्तीस महिनाअगाडि रुपन्देहीको भैरहवादेखि लुम्बिनी हुँदै कपिलवस्तुको तौलिहवा जोड्ने ४१ किलोमिटर १३० मिटर लामो सो सडक विस्तारको ठेक्का भारतीय कम्पनी गावर कन्सट्रक्शन लिमिटेडले पाएको थियो । उक्त सडकखण्डको भौतिक प्रगति अहिलेसम्म जम्मा ६० प्रतिशत भएको छ ।
बिजुली बजार पुलमा आकर्षक बत्ती जडान गरिने
बिजुली बजारमा नयाँ प्रविधिको प्रयोगगरी निर्माण गरिएको पुल (आर्क एण्ड ब्रिज) सम्पन्न भएसँगै यसमा आकर्षक बत्ती जडान गरिने तयारी भएको छ । यो पुल टिकाउसँगै शहरी क्षेत्रमा हेर्दा आकर्षकसमेत हुने भएकाले बत्ती आकर्षक नै राख्ने तयारी भइरहेको काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले जनाएको छ । सडकका दुवैतर्फ निर्माण भएका दुवै पुलको माथिल्लो भाग (आर्क) मा धेरै वटा सुन्दर बत्ती जडान हुने इञ्जिनीयर लक्ष्मण देवकोटाले बताए । ती बत्तीले टाढाटाढासम्म प्रकाशसमेत दिने उनले बताए ।
पुल बन्यो, बनेन सडक
बर्दियाको राजापुर नगरपालिकालाई कैलालीको टीकापुरसित जोड्न पाँच वर्षअघि कर्णाली नदीको सत्तीघाटमा पक्की पुल निर्माण भयो । तर, पुललाई जोड्ने सडक नबन्दा पुल उपयोग विहिन जस्तै भएको छ । कैलालीवाट छोटो दुरीमा बर्दिया हुँदै नेपालगञ्ज आउजाउ गर्न सकिने भएपनी राजापुरतर्फ करिब सात सय मिटर बाटो निर्माण नहुँदा समस्या भएको हो । बाटो निर्माणका लागि गत असारमै आवश्यक प्रकृया टुंग्याएर काम थाल्ने बताएपनी हालसम्म पनि निर्माण हुन नसकेको स्थानीयको भनाई छ ।